Haute cour de la justice – Vao mainka manome vahana ny tsimatimanota ny fisian’ny HCJ hoy i Clément Jaona filohan’ny SMM – Ao raha du 23 mars 2019 | NEXTHOPE RANARISON Tsilavo Corruption de la justice à Madagascar
Haute Cour de la Justice à MadagascarHaute cour de la justice - Vao mainka manome...
Haute Cour de la Justice à MadagascarNEXTHOPERANARISON TsilavoSyndicat des Magistrats de Madagascar
Haute cour de la justice – Vao mainka manome vahana ny tsimatimanota ny fisian’ny HCJ hoy i Clément Jaona filohan’ny SMM – Ao raha du 23 mars 2019
Mampanahy. Tsy resy lahatra amin’ny fahefana sy andraikitra nomena ny Fitsarana manokana hitsara an’ireo mpitondra ambony (HCJ) ny Sendikan’ny mpitsara eto Madagasikara (SMM). Nahitsy ny fanehoan-kevitr’i Clément Jaona, filohan’ny SMM, omaly raha nilaza fa : « vao main ka miaro ny tsimatimanota ny fananganana an’io Fitsarana io ».
«Maninona no ny fahefana politika no omem- pahefana hanapa-kevitra mikasika ny fanenjehana azy ireo. Tsy azo antoka mihitsy ny hisian’ny tena fametrahana rafitra hahafahana manameloka mpitondra fanjakana raha ny lalàna no jerena», hoy izy.
Miaiky ireo mpahay lalàna sasany fa vao mainka mampanano sarotra ny fanenjehana an’ireo mpitondra ambony ny fisian’ny andinin-dalàna manome fahefana an’ireo depiote hanapa-kevitra amin’ny fanenjehana ara-pitsarana na tsia an’ireo mpitondra ambony lreo.
Voafaritra ao anatin’ ny lalàna mifehy ny asan’ ny HCJ fa mila fankatoavan’ ny roa ampahatelon’ireo depiote ao amin’ny Antenimierampirenena ny fanenjehana mpitondra ambony. Isan’izany ireo mpikamban’ny governemanta teo aloha, voasaringotra amina raharaham- pitsarana. Ireo mpikambana eo anivon’ny Antenimieram- pirenena ihany koa no afaka manome alalana ny HCJ hanenjika an’ireo Filoham-pirenena teo aloha, raha nisy ny hadisoana nataony.
Soson-kevitra nataon’ny filohan’ny SMM ny amin’ny tokony fanafoanana ny Fitsarana manokana toy izao. «Amiko dia tsy mety izany satria vao mainka manome vahana an’ireo tsimatimanota ireo. Efa nisy, ohatra, ny raharaha momba ny Praiminisitra teo aloha, saingy tsy noraharahain’ireo depiote akory ny fanenjehana azy ka dia nidaboka fotsiny teo», hoy hatrany ny filohan’ny SMM.
Previous articleMinistra ny fitsarana teo aloha – Hogadraina noho ny raharaha kolikoly – Gasy Tia tanindrazana du 22 mars 2019
Next articleMadagascar, deux poids , deux mesures dans la lutte contre la corruption sur tous les plans – La gazette DGI du 25 mars 2019